Orinasa mpamokatra bobongolo seza China HEYA
Seza bobongolo dia manondro ny bobongolo ampiasaina hamokarana Seza bobongolo miaraka amin'ny milina fanorohana tsindrona. Araka ny fomban'ny vokatra isan-karazany dia misy ihany koa ny bobongolo amin'ny seza plastika azo raisina, mpanamboatra bobongolo tsindrona seza, bobongolo seza amoron-dranomasina, sns.
Taizhou Heya Mould Co., Ltd amin'ny maha orinasa mpamokatra bobongolo vao misondrotra, dia nitaona ny zava-niainan'ireo mitovy taona aminy ary nampifangaro ny foto-kevitr'ilay orinasa hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny Mould Chair.
Ny orinasa dia afaka manamboatra ny bobongolo seza ho an'ny mpanjifa araka ny fepetra takian'ny mpanjifa ary ampiana amin'ny endrika CAD / CAM / CAE matihanina, foibe fanodinana solosaina CNC, foibe fanodinana haingam-pandeha, latina CNC, EDM, fanapahana tariby, milina fikosoham-bary ary fanodinana hafainganam-pandeha avo lenta fitaovana.
Ny fampahafantarana ny zavatra takinao momba ny vokatra sy ny bobongolo ary ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny milina fanorohana tsindrona mifanentana dia hanampy anay hanome anao drafi-bidy haingana araka izay tratra.
Manantena ny hahatratra fiaraha-miasa lalindalina sy maharitra miaraka aminao izahay.
Anaran'ny vokatra Bobongolo seza
F: Aiza ny orinasanao?
A: Heya Mould no misy ao amin'ny No.3, Houshi Road, distrikan'i Huangyan, tanànan'ny Taizhou, Zhejiang, Tanibe Shina. Thers dia sahabo ho 50 minitra miala ny seranam-piaramanidina Luqiao; 20 minitra avy eo amin'ny gara Railway Taizhou. Miarahaba anao izahay mitsidika ny orinasanay
Previous: Bobongolo tsindrona seza
Manaraka: Seza bobongolo